सञ्चालकहरुको विवादले चरक मेमोरियल अस्पतालको ड्रिम प्रजेक्ट अलपत्र – Peacepokhara.com
सञ्चालकहरुको विवादले चरक मेमोरियल अस्पतालको ड्रिम प्रजेक्ट अलपत्र
पोखरा २८ पुस । सञ्चालकहरुको आपसी विवादका कारण पोखराको पृथ्बीचोक स्थित चरक मेमोरियल अस्पतालको ड्रिम प्रोजेक्ट अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि सेयरधनीहरुको आपसी विवादले अस्पतालको नयाँ बन्दै गरेको भवन अलपत्र परेको हो ।
आगामी बैंशाखदेखि निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएपनि ६ महिनाअघिदेखिको आपसी किचलोका कारण निर्माण कम्पनीको भुक्तानी समेत रोकिएको छ । सेयरधनीको विवादका कारण पोखराको नागढुंगामा बन्दै गरेको नयाँ भवन निर्माण कम्पनी सूर्य कन्स्ट्रक्सनको भुक्तानी समेत ४ महिनादेखि रोकिएको छ ।
लगानीकर्ताको आपसी विवाद बाहिर आएपछि बैंकले लोन समेत रोकेको छ । बिद्युत लाइन जडान, अक्सिजन पाइप जडान लगायतका आन्तरिक काम पनि बाँकीनै छ । ‘महिनामा झण्डै दिनहु बैंठक हुन्छन् सबै बैंठक आपसी कलहमै सकिन्छ, ‘ स्रोतले भन्यो ।
सेयरधनीको आपसी विवादको कारण नागढुंगामा बन्दै गरेको पोखराकै अत्याधुनिक अस्पताल भवन अलपत्र छ । लगानीकर्ताको विवादपछि बैंकले लोन रोक्का गरेको छ । निर्माण कम्पनीको भुक्तानी ४ महिनादेखि रोकिएको छ । सेयरधनी चिकित्सकहरु एकले अर्कोलाई पेल्न खोज्दा चरक मेमोरियल अस्पतालको ड्रिम प्रोजेक्टमा धक्का लागेको छ ।
पोखरामै अन्तराष्ट्रिय स्तरको उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले झण्डै दुई बर्ष अघिदेखि सुरु भएको ७ तले भवन निर्माण कार्य अझै जारी छ । करिब ५० करोड लागत अनुमान सहित सुरु गरिएको एक सय शैयाको अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण लगानीकर्ताकै विवादले पर सरेको हो । आपसी विवाद कायमै रहेमा स्वमं सेयरधनीहरुनै मर्कामा पर्नेछन् । हेलिप्याड, अन्डरग्राउण्ड पार्किंग, एसी सहितका सुइट र डिलक्स रुम सहित थप विशेषज्ञ चिकित्सकको अत्याधुनिक सेवा दिने गरी हालको चरक मेमोरियल अस्पताल पृथ्बीचोकबाट नागढुंगा स्थित नयाँ भवनमा सार्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
सेयरधनीहरुले आ-आफैविच रिसिइबी मोल्दै आफ्नै लगानीको ड्रिम प्रोजेक्ट पर धकेलिरहेको स्रोतले बतायो । ‘हुन त यो ब्यक्तिगत रिसिइबी र मनमुटाब नभई अस्पतालकै सेवा प्रवाहका विषयमा देखिएको विवाद हो । तर सामान्य विषयलाई सुल्झाउन नसक्दा करोडौंको प्रोजेक्ट पर सर्दैछ,’ स्रोतले भन्यो ।
विशेष गरी अस्पतालका सेयरधनी मध्येका डा. ऋषीराम ढकाल र डा. बद्री पौडेल विचमा देखिएको आपसी मनमुटावले उग्ररुप लिएपछि ड्रिम प्रोजेक्ट पछि धकेलिदै गएको हो । केहिदिन अघि ढकाललाई पौडेल पक्षले कुटपिट गरेको आरोप लागेपछि आपसी विवाद झन् उग्र बनेको छ ।
चरक मेमोरियल अस्पतालको ड्रिम प्रोजेक्ट
६ महिनादेखिको कलह
अस्पतालको विशेष स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार ढकाल र पौडेल समुहको आपसी विवाद झण्डै ६ महिना अघिदेखिनै सुरु भएको थियो । अस्पतालको सेवा विस्तारसँगै अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित नयाँ बन्दै गरेको भवनमा सरेपछि दिइने सुविधा र चिकित्सकका विषयबाट उनीहरु विच मनमुटाव सुरु भएको हो ।
विस्तारित थप सेवा सहितको अस्पताल नयाँ भवनबाट सञ्चालनमा आएपछि मेजर सर्जनको रुपमा डा. दिगविजय सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकलाई ल्याउने पौडेलको प्रस्तावप्रति ढकालले असहमति राखे । त्यसपछि हाल ब्यक्तिले सञ्चालन गर्दै आएको ल्याब र फार्मेसी अस्पतालले सञ्चालन गर्ने ढकालको प्रस्ताबलाई पौडेलले नकारे । एकले अर्काको प्रस्ताब लत्याउने र समस्या समाधानको साटो मुख फर्काएर हिड्ने प्रबृतिले अन्य सेयरधनीको लगानी समेत जोखिममा पारेको स्रोत बताउछ ।
अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकलाई भित्र्याएपछि आफु छायामा पर्ने डरमा ढकाल रहेको पौडेल पक्षको आरोप छ । ढकाल पक्षले भने पौडेललाई ल्याव र फार्मेसीको कमिसन खाएको आरोप लगाएका छन् । अस्पतालको ल्याव र फार्मेसी हाल रामचन्द्र रेग्मी र कपिल पोखरेलले सञ्चालन गरिरहेका छन् । पौडेल पक्षले भने हाल अस्पतालको नयाँ भवन सहित थप सेवा सुविधाका साथ ड्रिम प्रोजेक्ट तयार हुदै गरेको अबस्थामा ल्याव र फार्मेसीका लागि तत्काल लगानी गर्न नहुने अडान लिएका छन् । स्रोतका अनुसार अस्पतालले ल्याव र फार्मेसी आफै सञ्चालन गर्नु परेमा झण्डै थप ५ करोड लगानी गर्नुपर्नेछ ।
अस्पतालमा हाल १७ जना सेयरधनी छन् । जस मध्ये ढकालको पक्षमा १२ जना र अन्य पौडेलको पक्षमा छन् । अस्पतालको कुल सेयर मध्ये ऋषी पक्षको झण्डै ५१ प्रतिशत छ ।
डा. ऋषीले डा. बद्रीलाई आउट गर्न खोजेपछि बद्रीले राजेन्द्र नेपाली र अर्का एक जना गरी दुई जनाको सेयर तोकिएको भन्दा दोब्बर रकम तिरेर खरिद गरेका थिए । झण्डै तीन महिना अघि मात्रै डा. ऋषीले १२ बुदे अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै बोर्डबाट राजिनामा दिएका थिए । उनको अविश्वास प्रस्तावपछि डा. बद्रीले बोर्ड छाडे र ऋषी समुहको बाहुल्य सहित नयाँ बोर्ड बन्यो ।
त्यसपछि डा. ऋषीले ल्याव र फार्मेसी अस्पताललेनै चलाउने निर्णय गरेपछि डा. बद्री र उनी पक्षधर आक्रोसित भए । स्रोतका अनुसार यसबारे असन्तुष्ट पक्षसँग ऋषीले थप छलफल गर्न चाहेनन् । धेरै दिनसम्म उनीसँग कुरा हुन नसकेपछि एकदिन ओपिडी छिरेका बेला पौडेल समुहले छलफलका लागि आग्रह गरेको थियो । ल्याव र फार्मेसी अस्पतालले चलाउने भन्दै चिठ्ठी काटेपछि ल्याव सञ्चालक सहित डा. बद्रीले छलफल गर्न खोज्दा ढकाल तर्किएपछि घटना भएको स्रोतले बतायो ।
विश्वकपको उपाधि भिडन्त आज : फ्रान्स र क्रोएसिया भिड्दै
peacepokhara 15 Jul 2018
घुससहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका इन्जिनियर पक्राउ
peacepokhara 16 Jan 2018
लायन्स क्लब अफ फेवा फुलबारीमा बोहोरा
Krishna Dawadi 07 Apr 2019
पोखरा १७ का २१ जना ज्येष्ठ नागरिक लाई सम्मान
पौड्याल वंश महासंघको अध्यक्षमा लोकनाथ
जीप दुर्घटनामा नौ जनाको मृत्यु
गण्डकीको बजेटमा यस्ता छन् कृषिका कार्यक्रम, कृषकले लिएको ऋणको व्याजमा अनुदान दिईने
असार पाँच देखी माछापुच्छ्रेमा विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३२ अर्व १३ करोडको बजेट(बजेटको पूर्ण पाठ सहित)